Uchishandisa Flutter nekukasira mune nyowani Ubuntu zvinoshandiswa | Linux Vakapindwa muropa
Ndanga ndichishandisa imwe Ubuntu yemakore gumi nemashanu, ayo apfuura makore gumi nematatu achishandiswa kunyora zvinyorwa uye kunyangwe bhuku pane iro Canonical kugovera. Kunyangwe zvakadaro, vakomana vepaMark Shuttleworth vanokwanisa kundishamisa.
Ini munguva pfupi yapfuura ndakagadzira mutsara kuti nditaure zvandinotarisira nezveramangwana reshanduro nyowani. "A Debian-based Fedora ane Snap Mapakeji". Nezvo ini ndaida kuratidza kuti hunowanda Ubuntu hunowanzo kutaridzika senge yechinyakare GNOME-yakavakirwa kugovera, pasina chero epakutanga maficha andinofarira zvakanyanya.
Kunge dzimwe nguva zhinji, zvinoita kunge ndakanga ndisina kururama.
1 Uchishandisa Flutter nekutadza
2 Chii chinonzi Flutter?
3 Canonical uye Flutter
4 Tichaona riini iko kunyorera kutsva?
5 Kuisa Flutter paUbuntu
Uchishandisa Flutter nekutadza
Un Tweet Yakatumirwa pane account yekugovera inoti:
Flutter ndiyo yakasarudzika sarudzo yemangwana Ubuntu zvishandiso.
@kenvandine ¿, Injiniya maneja, ari pano kuti akuudze nezvezvimwe zvezvipo zveCanonical kuFlutter pa #FlutterEngage.
Uye inosanganisira chinongedzohuya kuzotaura.
Chii chinonzi Flutter?
Flutter iri seti yemidziyo yekugadzira mushandisi nzvimbo. Yakagadziriswa neGoogle, chinangwa chayo ndechekuti nekodhi imwechete kodhi zvinokwanisika kugadzira nzvimbo dzekutsanangudza kwazvino yedesktop, nhare mbozha uye mawebhusaiti.
Zvinoenderana neGoogle, zvakanakira Flutter ndeizvi:
Kurumidza kubhadharisa: Flutter inopisa reload inomhanyisa nguva dzekuvandudza nekuregedza yakagadziridzwa interface mune isingasviki sekondi mune emulators, simulators, uye rarama nharaunda.
Easy interface yekugadzira: Flutter inouya pamwe neWidget Material Dhizaini uye Cupertino (Yakanakira iOS), maApi ekufamba uye kupururudza uye akawanda maitirwo.
Hunhu hwetsika pamapuratifomu ese akatsigirwa: Zvikamu zvaro zvakasiyana zvinotora musiyano wekushanda pane yega yega mapuratifomu.
Canonical uye Flutter
Panguva iyoyo, mumwe wangu Pablinux akataura navo yechibvumirano chakaitwa neCanonical neGoogle kuita Flutter "chikamu chepamutemo cheLinux". Kwaive kufamba kwakakodzera makambani ese ari maviri. Padivi reGoogle, ine imwe kambani inobhadhara vanogadzira kuti vaite Flutter desktop-inoshamwaridzika. Canonical, yechikamu chayo, inoisa Ubuntu segedhi rezvakawanda zvekushandisa kweApple (yakanyorwa muDart) kuendeswa kuLinux kana kuti vanogadzira mapurogiramu efoni vanosarudza kuchinjira kune imwe chikuva.
Kutora muenzaniso wekufungidzira. Kugadzira WhatsAPP mutengi weLinux muPython uye kushandisa GTK kana QT yeiyo graphical interface haina kufanana nekugadzirisa kodhi muDart uye iyo interface yakagadzirwa neFlutter. Ongorora: Ini handizive kuti mutauro weWhatsApp wakanyorwa mutauro upi, ingangove Java, asi muenzaniso unonzwisisika.
NaDart ndinoreva mutauro wekugadzira muchinjiko-chikuva zvinoshandiswa zvakare yakagadzirwa neGoogle.
Tichaona riini iko kunyorera kutsva?
Kubva pakuonekwa kwayo, iyo yekutanga app yepamutemo yekushandisa Flutter-based interface ichave inosimudza iyo inotsiva Ubiquity. iyo ichazokwanisa kushandiswa mune yekuyedza vhezheni mune inotevera Ubuntu 21.10 (Gumiguru yegore rino) Kana zvese zvikafamba mushe, dheti rekutanga richava muna Kubvumbi 2022 nekuvhurwa kweinotevera yakawedzerwa rutsigiro vhezheni.
Ziva kuti ndawana bhatani uye ndiri kusona bhachi pairi. Kunze kweiyo tweet iyo inotaura nezve kushandisa Flutter nekumisikidza, ini handina zano kana paine sarudzo yekutora nzvimbo dzeGNOME senge vhidhiyo inoridza kana Calculator nevamwe zvichibva paFlutter
Kuisa Flutter paUbuntu
Kukurudzira kushandiswa kweFlutter nekumisikidza kwemaapplication matsva, Ubuntu yakafunga kuita kuti zvive nyore kuisa maturusi anodiwa uchishandisa Snap mapakeji.
Izvo zvinoitwa nemurairo:
Isu tinoisa yakasanganiswa yekuvandudza nharaunda ne:
Isu tinobatanidza zvidimbu nemirairo inotevera
Kana iwe uchida kutsvaga yakawanda yakazara mirairo pane iyo kuiswa muUbuntu unogona kuiwana pano. Kuti udzidze zvakawanda nezve Flutter tevera el chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iko kushandiswa kweFlutter nekumisikidza muzvishandiso zvitsva. Hutsva Ubuntu chimiro?
Steam Link yave kuwanikwa yeLinux, nekuda kweCollabora